China Ukuphefumla Pet Carry Bag Ukwenziwa kunye Factory | UKumkani
Inja yethu iyiphathi yenqwelomoya evunyiweyo kwaye inamacala angaphakathi kunye namacala athambileyo, yenza izilwanyana zizive zikhululekile kwaye zikhuselekile ngaphakathi kwaye zingathanda ukuhlala phantsi kwaye zilale kancinci.
Iimpawu zePhethi yenethiwekhi
Thatha isilwanyana sakho ngokukhuselekileyo ngomthuthi othambileyo. Yenzelwe ukugcina isilwanyana sikhuselekile, sikhuselekile kwaye sikhululekile. Umphathi wezilwanyana ulungele ukuhamba ngenqwelomoya okanye ngemoto okanye ngokundwendwela ugqirha wezilwanyana kwaye ulungele izinja kunye neekati ezinobunzima obufikelela kwi-15lbs.
Uyilo olomeleleyo noluthembekileyo:
Ukuthuthwa okukhuselekileyo, umthuthi uxhotyiswe ngeziphatho ezi-2 ezinokudityaniswa ukuhambisa isilwanyana kunye nokugcina ulungelelwano.
Ikwabandakanya umtya wamagxa onokuthi usebenze ngaphandle kokusebenzisa izandla zakho. Ingasongwa kwaye ibekwe phantsi kwezihlalo zenqwelomoya; Ngale ndlela, ungasoloko usithatha isilwanyana sakho ngaphandle kokuba uhambe wedwa.
Inkxaso yezilwanyana inendawo evulekileyo esecaleni ukuvumela isilwanyana ukuba singene ngaphandle kweengxaki. Uziphu owomeleleyo ugcina ukuvuleka ngokuqinileyo kuvaliwe ngexesha lothutho.
Iipaneli zokungenisa umoya ezinemiyalezo ephefumlayo kumacala amathathu aziqinisekisi kuphela ukuhamba komoya okwaneleyo, kodwa zivumela isilwanyana ukuba sijonge ngaphandle.
Ukuma kwesilwanyana sasekhaya kunesiseko esisusekayo esenza indawo eqinileyo nezinzileyo yesilwanyana sakho sasekhaya, kunye nomtya woboya osuswayo.
Inika ibhedi entofontofo apho isilwanyana sakho silala khona ngexesha lohambo. Yeyona ndlela ifanelekileyo yokuhamba kunye nezilwanyana zasekhaya.
Ulwazi ngokhuseleko: Musa ukusishiya isilwanyana singakhathalelwanga ngelixa siphethe. Xa uhamba ngemoto, beka umthuthi kwisitulo esingasemva.
Ukucoca: Ityali yoboya ethambileyo ingasuswa kwaye ihlanjwe ngesandla, ngelixa unokucoca isibiyeli apho sinebala.
Ubukhulu: 41.1 * 24 * 30.7cm /16.2 * 9.45 * 12.1 intshi (Nceda ulinganise ubungakanani kunye nobunzima besilwanyana sakho sasekhaya ngaphambi kokuba uthenge)
inja thwala ibhegi
Kupholile ubhaka kupholile ubhaka Beach Camping
Intente ebuyela emva yoMntu o-1-2
Mens Nylon Belt 51 intshi Elastic ukolula
Inethiwekhi yokuThintela ukuThintela ukuHamba kweNja
Izandla ezi-6 Zikhululekile Inja yeLeash